I-cornice yokufaka isakhiwo esekelwe iphrofayli yepulasitiki, ifakwe iziqondiso ezikhethekile - izindawo zokudla. Bafaka izingwegwe zamakhethini noma ama-hangers ngama-hinges. Okwamanje kunezinketho eziningi zokukhethwa kuzo, futhi ukukhetha kuncike kulokho okushiwo isakhiwo sewindi. Kunokuba kube nzima nakakhulu, okuthakazelisayo nokukhangayo kungaba ukwakheka jikelele kwezingaphakathi.
I-cornice ye-plailing okwamanje yenziwe ngezinto ezihlukahlukene, kodwa okulula kakhulu futhi okusebenzayo ngumkhiqizo owenziwe ngepulasitiki enzima kakhulu yokusebenza epulasitiki engagqoki, elula, ephelele esakhiweni, okuvumela ukuba isetshenziswe kuzo zonke izinhlobo zamakhethini. Ngaphakathi imikhiqizo enjalo ivame ukungabi nalutho, okunikeza ukukhanya kwabo okumangalisayo.
Amandla esakhiweni esiphezulu anikezwa izintambo zangaphakathi ezisezinkomba zesikhathi eside nezingezansi. Ngenxa yalezi zimfanelo, i-cornice ye-plailing ingasetshenziselwa ukwamukela amakhethini ayenzima futhi alula. Awekho amakhemikhali ayingozi noma anobuthi kulwazi lomkhiqizo.
Izakhi ezihlukahlukene ze-Rotary kanye nemichilo yokuhlobisa ikuvumela ukuthi uhlanganise izinhlobo ezihlukahlukene zinkimbinkimbi. Kunezakhi ezintathu zokujikeleza ezenzelwe amawindi azinkimbinkimbi, kanye nezingxenye zomugqa owodwa nambili ngendlela yama-arcs. Ukuba khona ekuqoqweni komkhiqizi ngamunye wokukhethwa kwemidwebo enkulu kukuvumela ukuba uthole indawo yangaphakathi yile ndlela, okuzofaneleka kakhulu. Uhlelo olulodwa lomugqa lunezinzuzo zalo. I-cornice enjalo ephahleni ingalandelwa kusuka ezakhiweni ngabanye, ibeka emigqeni eminingi njengoba kudingwa umqondo wokuklama. Ngenxa yalokhu, ungakha imiklamo engavamile ngempela.
Ukusebenzisa i-polyurethane cornice, ungenza uhlelo lwezingodo ezibizwa ngeJapane. Lapha, ithayi lepulasitiki lizoba ngumhlahlandlela osebenzayo nezokwelapha. Ama-cornices anjalo angase abe isisekelo samakhethini aseRoma.
Njengoba kusetshenziswa amafasitela amaningi asepulasitiki okwamanje, iphrofayili yento efanayo iyovumelana nendawo yonke ngokuphumelelayo ngempumelelo. Lokhu ngeke kuphule ubuhle be-aesthetics yobunjwa bonke. Amakhetheni kule cornice ngokuvamile atholakale ngokuqinile kusuka ephahleni kuya phansi. Lokhu kuqinisekisa ukungena okuncane okubanda ngokusebenzisa ama-windows slots, futhi ukuvikeleka kwamalanga nobusuku ekukhanyeni okungadingekile kuyoba ngaphezulu.
I-Cornice-string iyolunye uhlobo lomnikazi wesikhumba, okusho ukuthi kulula ukusebenzisa futhi kulula ukusebenza. It is fixed at a short distance kusuka iwindi, ikuvumela ukuba ulungise amakhethini kuwo ngendlela elula ngangokunokwenzeka. Lo mbono uvame ukubhekwa kuwo ama-mini-cornices, ngoba awuthathi isikhala esiphezulu.
Kuyafaneleka ukuthi ukukhetha kokugcina kwalokhu noma lokho kukhetho kuncike ngokuphelele ekuthandweni kwakho kokuncintisana.
Bosch MFW 1550 - inyama grinder yonke izikhathi
Amagundane okugaya alayishiwe - imishini yensimu yanamuhla
Njengoba e-Windows 10 ukwenza zakudala "Qala": izincomo ezimbalwa ezilula
Contact lens Soflens Imibala Yemvelo. Izibuyekezo
Diana Gurtskaya biography kanye nempilo yakho. Usizi lokukhulelwa Diana Gurtskaya